Lapan’ny Fanatanjahantena Mahamasina : Notolorana seho mendrika ireo mpampianatra Fram -
AccueilRaharaham-pirenenaLapan’ny Fanatanjahantena Mahamasina : Notolorana seho mendrika ireo mpampianatra Fram
16/09/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Nangorom-potsy omaly ny tetsy amin’ny lapan’ny fanatanjahantena Mahamasina, nandritra ny hetsika fandraisana ho mpiasam-panjakana ireo mpampianatra nokaramain’ny fikambanan’ny ray aman-drenin’ny mpianatra, na ny Fram. Lanonana tsy manam-paharoa no natolotra ireo mpampianatra ireo, izay notronin’ny filohan’ny Repoblika, Hery Rajaonarimampianina. Tsy ambaka ireo seho goavana fahita ny nandraisana ireto mpampianatra ireto, na teo amin’ny lafin’ny teknika (jiro sy hazavana, ary ravaka samihafa) na teo amin’ny seho niarahana tamin’ireo mpanakanto maro. Ankoatra ny maha lanonam-panjakana azy, dia nisongadina tamin’ny hetsika ihany koa ny lafin’ny kolontsaina ary nanehoana ny fiarahana ao anatin’ny fahasamihafana eo amin’ny malagasy. Nanampy ireo mpanakanto samihafa nahitana an-dry Ry Kala Vazo, Tence Mena ary Big Mj sy Arnaah ny fanehoana ireo dihy nentin-drazana toa ny avy any amin’ny faritra Androy nataon’ny terak’i Tsihombe.
Maro ireo mpampianatra niatrika ity lanonana ity, izay nisalotra ny fitafiana maha-mpampianatra azy, ka maro tamin’izy ireo no tsy tafiditra tao amin’ny Lapan’ny fanatanjahantena, nefa afaka tsara nanaraka ny fizotry ny lanonana rehetra tamin’ny alalan’ny fahitalavitra lehibe. Naneho ny heviny mikasika ny mpampianatra ihany koa ireo mpanakanto vitsivitsy toa an-dry Françis Turbo, Jaojoby, Dama… izay samy miombon-kevitra fa tokony apetraka amin’ny toerana sahaza azy ny mpampianatra noho izy ireo mamolavola ny ho avin’ny ankizy, izay ho avin’ny firenena. Nitondra ny fanentanana tamin’ny hetsika i Tsarafara na Rajao, izay fantatra teo amin’ny fahaizana manentana sy mitondra hatsikana.
Rivo Rakotovao : Voatendry ho loholona nisolo an’i Ahmad
Araka ny didim-panjakana laharana 2017-954 hanendrena ireo mpikambana ao amin’ny Antenimieran-doholon’i Madagasikara avy amin’ny Filohan’ny Repoblika, dia voatendry ho loholon’i Madagasikara Rakotovao Rivo. Ny sekretera jeneraly eo anivon’ny Fiadidiana ny Repoblika, no namaky izany teny ...Tohiny
Robert Yamate : Hotohizana ny fanampiana an’i Madagasikara